शेयरमा दीर्घकालीन लगानीको अवसर
स्थानीय चुनावको वातावरणले गर्दा नेप्सेमा कारोबार घट्दो छ । स्थानीय चुनावका लागि धेरै लगानीकर्ता राजधानी बाहिर रहेको र चुनावको अन्तिम परिणाम सबै सार्वजनिक नहुँदासम्म शेयर बजारमा कारोबार सुस्त हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेप्सेमा बढोत्तरीका लागि सकारात्मक समाचारको पर्खाइ सधैँ रहने गर्छ । स्थानीय चुनाव हुने सकारात्मक समाचारको प्रभाव बजारमा न्यून भएको अवस्था छ अहिले । चुनावी नतिजामा कुन पार्टी तथा समूहले बढी स्थान जिते भन्ने विषयले पनि बजारमा खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिँदैन । लगानीकर्ता अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । जसले गर्दा नेप्से परिसूचकाङ्कमा सामान्य उतारचढाव देखिए पनि कारोबार रकममा भने खासै बढोत्तरी देख्न सकिएको छैन ।
अबको शेयर बजारमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विषय भनेको आगामी बजेटमा सरकारले ल्याउने नीति नै हो । सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्न थालेको छ, त्यसले पनि बजारमा सामान्य प्रभाव पार्न सक्छ तर ठूलो परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै स्थानीय तहका २८३ स्थानमा चुनाव समाप्त भए पनि दोस्रो चरणको चुनावमा मधेशवादी दललाई मनाएर चुनावमा लान सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसले पनि बजारमा सामान्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ । शेयर बजार नै हल्लाको बजार हो । नेपालजस्तो राजनीतिक सङ्क्रमण भोग्दै गरेको मुलुकमा राजनीतिमा हुने कुनै पनि हलचलले बजारमा प्रभाव पार्ने कुरा सामान्य नै हो तर वर्तमान सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि नेपाली शेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव आउने गरी परिवर्तन हुन सक्ने अहम् र महŒवपूर्ण विषय भने राजनीतिक बाहेकका अन्य मुद्दा छन् ।
हाल नेपाली शेयर बजारलाई ठूलो फड्को मार्ने गरी परिवर्तन हुने अवस्था देख्न सकिन्न । बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने अन्य विषयलाई केलाउँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउने कुरा नै प्रमुख हो । कमर्सियल बैङ्कका लागि आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्कका लागि दुई अर्ब ५० करोड तथा फाइनान्स कम्पनीका लागि ८० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउने क्रममा धेरै संस्था मर्जमा गएको र बोनस तथा हकप्रद शेयरको बाढी नै आएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि जारी नै रहने निश्चित छ । चुक्ता पुँजी बढाउने क्रममा अझै बजारमा हकप्रद र बोनस थुप्रै आउन बाँकी छ । त्यस्तो नयाँ आएको शेयर खरिद गर्नका लागि थप लगानीकर्ता र ठूलो रकम चाहिन्छ । त्यसका लागि हाल दलाल कम्पनीले मोफसलमा खोलेको केही शाखामा थपिएका लगानीकर्ता पर्याप्त नहुन सक्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नाफामा वृद्धि गरेको समाचार हाल प्रशस्त आउने गरेको पाइन्छ तर के संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाएको तुलनामा प्रतिशेयर आम्दानी पनि कायम राख्न सफल भएका छन् ? साथै व्यापार विस्तार गर्दाको अवस्थामा खराब कर्जालाई बढ्न नदिन सफल भएका छन् ? भन्ने मुख्य दुई कुरा लगानीकर्ताले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । समाचारमा नाफा बढेको कुरालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । लगानीकर्ताले समग्र आर्थिक स्वास्थ्य राम्ररी हेरेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता पुँजी वृद्धिको आधारमा नाफा बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा दोस्रो बजारमा शेयर लगानी गर्नका लागि कर्जा पाउन जेठ–असारमा निकै गाह्रो पर्ने मात्र होइन, शेयर धितो राखेर कर्जा लिएकाको पनि थुप्रै शेयर बजारमा लिलाममा आउन सक्छ । जसले गर्दा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढ्न गई नेप्से माथि जान बाधा पुग्न सक्छ । नेप्सेमा दैनिक सूचीकृत हुने हकप्रद, साधारण तथा बोनस शेयरले उसै त आपूर्ति बढेका बेला अझ आपूर्ति बढ्नुलाई बजार माथि जाने दिशामा अड्चनको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाली शेयर बजारमा बैङ्क वित्तीय संस्थापछिको ठूलो समूह भनेको बीमा समूहको शेयर नै हो । बीमा समितिले जीवन बीमाको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब तथा निर्जीवन बीमाको एक अर्ब पु¥याउनका लागि दिएको आगामी ०७५ असार मसान्तसम्मको सीमामा चुक्ता पुँजी बढाउने सिलसिलामा थुप्रै हकप्रद र बोनस शेयर थपिने निश्चित छ । त्यसको अतिरिक्त हालै मात्र दश नयाँ जीवनबीमा कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको र अब पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनी थप्ने विषयले त्यस्ता कम्पनीको प्राथमिक शेयर पनि बजारमा आउने क्रम शुरु हुनेछ । नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादनले गति लिएको बेला सो समूहको साधारण शेयर बजारमा आउने क्रम पनि जारी नै देखिन्छ । यसरी चौतर्फी रूपमा नेपाली शेयर बजारमा शेयरको आपूर्ति थपिएको अवस्थामा आपूर्तिलाई मागले सन्तुलन कायम राख्नका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश गराउने विषय तथा अनलाइन ट्रेडिङ सञ्चालन जस्ता कुरा तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ, त्यसले मात्र बजारलाई थप उचाइमा पु¥याउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
शेयर बजार आगामी केही महिना बढेको आपूर्ति धान्दैमा माथि जाने सम्भावना न्यून भए पनि आगामी कात्तिक मङ्सिरसम्ममा चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट समेत बोनस तथा हकप्रद शेयर प्रदान गर्ने वा मर्जमा जाने भन्ने विषयको टुङ्गो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगाइ सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताका लागि कसले कति प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सहज हुने देखिन्छ । ०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा मुलुकको राजनीतिले भावी दिशा तय गरिसक्ने देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको पुँजी वृद्धिको विषय ०७५ असारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुख्य गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिको टुङ्गो, राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य तथा गैरआवासीय नेपालीको बजारमा प्रवेश र अनलाइन ट्रेडिङको शुरुआत जस्ता विषयको चाँजोपाँजो मिल्दाको अवस्थापश्चात् भने बजारले नयाँ उचाइ बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लामो समयको लागि बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो भएको र भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीमा लगानीका लागि हालको बजार मूल्य लगानीयोग्य नै देखिए पनि छोटो समयका लागि टे«ेडिङ गरेर नाफा कमाउनेका लागि भने समय त्यति सहज देखिँदैन ।